OSB-3 - DABEECADDA SAXDA AH: MIISAANKA IYO CABBIRKA, CODSIGA IYO FARSAMOOYINKA FARSAMADA, WAXYEELLADA IYO FAA'IIDOOYINKA KA MID AH QOYAAN U ADKAYSTA - INFRASTRUCTURE
Guddi udub dhexaad ah OSP-3 (OSB-3): sifooyinka iyo codsiyada
Marka aad qabanayso shaqada dibadda ee dhismaha, waa muhiim inaad isticmaasho alaab tayo leh oo adkaysi u ah xaaladaha cimilada. Guddi madaxbanaan (OSB) waa wakiil ku filan oo ah raqiis, laakiin qalabka dhismaha tayo sare leh. Tilmaamayaasha ugu fiican waxay bixiyaan faa'iido cad oo ku saabsan hirgelinta qaabka ugu sarreeya ee derbiyada gudaha iyo facsiyada dibadda.
Gudbinta jaangooyada, eng. "Meel jiidasho leh" - qalab lagu cadaadiyay seddex lakab oo ah xakamaynta alwaax. Jihaynta chips ee OSP-3 waxay leedahay macne gaar ah:
gudaha qayb ka mid ah jihada udubdhexaadka ah;
dibadda qaybuhu waxay leeyihiin jihayn joogto ah.
Thanks to tiknoolijiyadaan, xoogga gaarka ah iyo iska caabin la'aanta waxtarka dheeraadka ah ayaa la gaarey.
Soo saarista taarikada waxaa sameeya mashiinno khaas ah oo khaas ah, kaas oo alwaaxa la jajabiyay (laga xaaqay), ka dibna si fiican loo qalajiyey qalabyada gaarka ah.
Ma taqaanaa? Hannaanka qalajinta qoryaha qoryaha laga soo iibsado warshadaha cuntada, gaar ahaan, waxay adeegsadeen farsamada qalajinta ee wax soo saarka chips baradho.
Heerka kama dambaysta ah ee diyaarinta waa kala-soocidda jajabyada iyo diidmada ayadoo loo eegayo sifooyinka. Marka la soo saaro OSB, jajabyada qoryaha ayaa laga yaabaa inay yeeshaan cabbiraha soo socda:
dhererka illaa 15 cm;
width in 1.2 cm;
oo dhumucdiisuna tahay 0.08 cm
Nidaamka dib-u-soo-kabashada (iwm), isugeynta wax-soo-saarka iyo qulqulka inta lagu jiro wax-soo-saarku wuxuu dhacayaa iyadoo la adeegsanayo maaddada qoryaha iyo caanaha iyadoo lagu darayo sunta cayayaanka iyo antiseptics (tusaale, boric acid), iyo noocyada kala duwan ee maaddooyinka loo isticmaalo lakabyada gudaha iyo dibedda.
Dhamaadka wax soo saarka, lakabyada jajabyada ah ayaa la dhigaa jihada ayadoo la raacayo mashiinka mashiinka ah ee diyaarad gaar ah, ka dib markaa la riixo oo la gooyo shabakadda cabbirka. Marka la soo saaro wax soo saarka noocan oo kale ah, waxaa la helaa walxaha cabbirka qiyaasta ah, oo laga sameeyey jajabyo qoryo leh oo quman, oo isku dhafan oo leh qiyaasta heerkulka sare ee saxaafadda iyo daaweynta kiimikada si loo kordhiyo iska caabinta xaaladaha cimilada.
Waa muhiim! Wax soosaarka tayo sare leh wuxuu damaanad qaadaa shuruudaha "dab-demiska" sheyga.
Guddi madaxbannaan sida waafaqsan heerarka caadiga ah ee la oggol yahay waxaa lagu sifeeyay nooca:
xoog u yar isticmaalka qolalka leh qoyaan yar - nooca OSB-1;
xoogga sare ee loo isticmaalo qaab dhismeedka taageerada qolalka leh qoyaan yar - nooca OSB-2;
xoogga sare ee hawlgalka ee xaaladaha qoyaan badan - nooca OSB-3;
qalabka joogtada ah ee loo isticmaalo sidii qaabdhismeed taageera ee xaaladaha qoyaan badan - nooca OSB-4.
Iyadoo ku xiran dusha sare ee dibedda, OSP-3 wuxuu u qaybsan yahay noocyada soo socda:
oo leh daaweyn dheeraad ah (dabacsan);
iyada oo aan lahayn daaweyn dheeraad ah (aan la xakamayn);
iyadoo dhammaatay dhamaadka (gogol);
hal dhinac dhinac la gooyey (isbedelay);
daboolay laminate (laminated).
Nooca saxanka wuxuu ku xiran yahay aagaggiisa codsiga. Cufnaanta iyo xoogga saxda ah ee taargooyinka, waxay sii korodhaa adkaynta culeyska culus ee xaaladaha adag. Tani tayada OSB waxay si toos ah u saameyneysaa kharashka maaddada, taniyo marka la eego calaamadinta maaddada, kharashka badan.
Dayactir guri ama guri wuxuu u baahan yahay diyaar garow horudhac ah. Taasi waa sababta ay waxtar u yeelan doonto inaad barato: sida rinjiga looga saaro darbiyada, iyo cadad ka soo saarka, sida loo xajiyo darbiga, sida biyaha loo dhigo guryaha gaarka loo leeyahay, sida loo dhigo laydhka iyo beddelka, sida loo sameeyo qaybta dusha sare ee albaabka ama sida derbiyada dusha sare leh.
Wax soo saarka casriga ah ee dhismaha ayaa noo ogolaanaya in aan soo saaro alaabooyin leh astaamo farsamo.
OSP-3 wuxuu leeyahay qaabab kala duwan:
cabirku wuxuu noqon karaa: 1220 mm × 2440 mm, 1250 mm × 2500 mm, 1250 mm × 2800 mm, 2500 mm × 1850 mm;
dhumucdiisuna waxay noqon kartaa: 6 mm, 8 mm, 9 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm.
Video: muuqaalka guud iyo sifooyinka macaamiisha ee OSP OSB-3 Miisaanka waxay kuxirantahay xajmiga iyo dhumucda OSB waxayna kala duwanaan kartaa 15 kg ilaa 45 kg.
Cufka OSB - 650 kg / m2, taas oo u dhiganta cufnaanta tufaaxa dhaadheer.
Ma taqaanaa? Goobaha jilbaha leh waxay awoodaan in ay sii wataan xooggooda xitaa 24 saacadood oo biyo ah.
Doorashada hoggaanka istiraatiijiga ah waxaa saameeya baaxadda codsiga mustaqbalka ee maaddada iyo shuruudaha kaydinta haddii loo baahdo. Astaamaha kaydka ugu badan waxay ka caawiyaan kaydinta bakhaarada leh qoyaan dhexdhexaad ah iyo hawo wanaagsan.
Maqnaanshaha xaaladaha noocaas ah, kaydinta ku habboon filimka ama dhismaha; waxaa muhiim ah in lagu kala saaro taarikada dhan dhinacyada leh daboolka filimka ka soo baxa deegaanka.
Guddi madaxbannaan ee dabeecaddiisa ayaa leh sifooyin wanaagsan:
dabiiciga ah ee alaabta ceeriin ee wax soo saarka ayaa go'aaminaya nabadda deegaanka deegaanka ee OSB;
Kharashka macquulka ah wuxuu ka dhigayaa waxyaabaha la dalbaday;
Sidaa darteed, waxa laga sameeyay mashiinka qoryaha, sidaas awgeed, miisaan yar ayuu leeyahay;
OSB laga sameeyey alaabta ceyriinka dabiiciga ahi waxay si sahal ah u fududeyneysaa shaqadeeda, sidaas darteed uma baahnid isticmaalka qalab aad u sarreeya;
jihada udubdhexaadka ah ee jajabyada qoryaha ayaa siinaya jajabnaanta guddiga, tayadaasi waa la qiimeeyaa marka la shaqeynayo meelaha dusha sare leh;
jiheynta isdhexgalka sidoo kale waxay u oggolaaneysaa in ay adkeeyaan culeyska culus ee hawlgalka;
Chips wood waxay leeyihiin codka iyo kulaylka, oo bixiya tayada iyo OSB.
Marka la barbardhigo macaashka faa'iidooyinka, cilladaha PCB waxay leeyihiin wax yar. Sababta ugu weyn ee ay u joogaan waxay ku xiran tahay soo saaraha:
Qadar badan oo qashinka qoryaha qashinka leh marka la shaqeynayo OSB waxay u baahan tahay joogitaanka qalabka badbaadada (oogada, maaskaro, gacmo gashi). Waxaa intaa dheer, qalab lagu soo saaro soosaarka kiimikada, helista gaasta iyo halkaa ku noolaan karo, wuxuu keeni karaa xasaasiyadaha xasaasiyadda ama dhibaatooyinka kale ee ka yimaada hawlaha neefsashada.
Si loo soo saaro tayada hoose ee OSB, waxaa la isticmaali karaa qalabka phenol-formaldehyde la isticmaali karo, taas oo, inta lagu jiro hawlgalka, waxay awood u leedahay sii deynta kansarka, oo sumeynaya hawada gudaha.
Waa muhiim! Isticmaalidda wax soo saarka alwaaxda tayada hoose waxay halis u tahay nolosha iyo kaydinta OSP-3.
Baaxadda hoggaanka istiraatijiyadeed waa mid ballaadhan. Shaqooyinka gudaha ee isticmaalka OSB:
loogu talagalay sagxadaha dhulka;
marada derbiga iyo saqafka;
dhismaha qaab dhismeedka qaab dhismeedka, oo ay ku jiraan jaranjarada iyo saqafka;
ee soo saarista muraayadaha culus ama roogagga kaydinta.
Shaqooyinka dibadda, PCBs waxaa loo isticmaalaa:
sida saldhiga salka u dhigista ee fargeetada dhoobada ah; Isticmaal OSB adoo saaraya shingles oo daboolaya derbiyada facade
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u akhrido sida loo hagaajiyo saqafka adag iyo duleelka, iyo sidoo kale sida saqafka loogu saari karo ondulin ama foornada birta.
waayo aragga dibadda ee derbiyada facade;
qaab dhismeedyada dibadda ah, oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo qoyan.
Xeerka ugu muhiimsan ee isticmaalka guddiga istiraatiijiga ah waa in guddiyada waa in loo adeegsadaa si waafaqsan ulajeedkooda, sida ku cad calaamadahooda.
Kuwa ugu fiican ee Ruushka
Astaamaha wanaagsan iyo kharashka hooseeya ee OSP-3 wuxuu ka dhigayaa waxyaabaha laga rabo, wax soo saarkiisuna waxay ku jiraan wadamo badan oo adduunka ah. Farqiga kaliya ee muhiimka ah waa joogitaanka tiknoolajiyada sare iyo horumarinta wax soo saarka Yurub ee istiraatiijiyadda istiraatiijiga ah, kaas oo si toos ah uga muuqda tayada maaddada.
Sida kuwa soo saaraha Ruushka, waxaa sidoo kale jira kuwa soo saaraha qalabka dhismaha ee tayo sare leh, oo ay ku jiraan OSP-3, awood u leh inay la tartamaan shirkadaha yurub.
Waa muhiim! Qiimaha ruska Ruushku aad ayuu uga hooseeyaa kuwa yurub, taas oo soo saara alaabooyinka la iibsado.
Kuwa soo-saarayaasha ugu fiican ee kuraasta qaybaha isdifaaca ee Russia waa:
MLC "Kalevala"Iyada oo leh awooda wax soo saarka ee ka badan 600,000 m2, waxay ku taalaa Jamhuuriyadda Karelia.
Shirkadda "STOD" (Tiknoolajiyada farsamada qoraxda casriga ah), oo leh wax soo saarka wax ka badan 500,000 m2, wuxuu ku yaalaa magaalada Torzhok.
Warshad Kronospan (Kronospan)Iyada oo leh awooda wax soo saarka ee 900,000 m2, waxay ku taalaa Yegoryevsk.
Si gacan looga geysto fulinta shaqada dhismaha si deg deg ah oo si hufan ufilan guddiga hoggaanka, shaqada oo aan u baahnayn "dadaal badan" iyo qalab xirfad leh. Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee waxtarka leh waxaa ka mid ah qaabab kala duwan, calaamad ku haboon iyo kharash yar. Tayadaasi waxay marar badan ka sareysaa cilladaha yaryar ee OSP-3, iyo isticmaalka karti leh ee taarikada waxay xaqiijineysaa heer sare oo qalliin ah.
Waxsoosaarka plat OSB "Kronospan" - sida ay u soo baxday, oo ah wax aad u xiiso badan. La shaqaynta iyada waa mid fudud. Waxaa si fudud loo gooyaa qalab kasta oo ku yaala geedka, ha ahaato qoryo, jigsaw ama buunshaha leh jarjar geedka. Taasi waa sida ugu dambeeya ee aan u isticmaalo.
Waxaa si fudud loo jajabinayaa, ficil ahaan aan lahayn jajab. Waxa ugu muhiimsani maaha in la dhaqaajiyo.
Inta badan isticmaalka saxanka noocaan ah waa mid ballaaran. Qofka ayaa xoqaya saqafka, qof ayaa u isticmaalaya sida qalabka qaybaha, waxaan arkay in ay sidoo kale garaaceen garaashka gudaha, halkaan waxaan isticmaalayaa OSB 9 mm qaro weyn oo weyn. si loo daboolo saqafka hoostiisa hoostiisa.
Maaddadu waa mid si siman u siman, xaashida qiyaasta ah 1.25 mitir iyadoo 2.5 meter ah.
Waxay u muuqataa sida tan. Qalabka OSB-3 waa qoyaan diidmo ah, laakiin tani macnaheedu maaha inay tahay biyuhu. Toddobaad usbuuc ka mid ah roobka ma ahan mid muhiim u ah isaga, laakiin ma aha mid ku haboon in la quusiyo biyaha. Qolalka qoyan ee qoyan waxaa jira qalab kale. Waxaan kugula talineynaa sida wax u dheelitiran oo noocyo badan oo shaqo ah. Waxaan iibsaday waraaqda OSB xilliga qaboobaha xitaa qiimaha 14 bilyan oo riyin ah bog kasta. Hadda qiimaha waa qiyaastii 17 rubi, laakiin haddii aad eegto dukaamada waxaad ka heli kartaa waxoogaa raqiis ah. Qalabku ma aha mid raqiis ah, laakiin ma jiraan wax xulasho gaar ah. Iyada oo la raacayo guddi jilicsan ama jajaban si aad u jiifsato, ama OSB saxan. Nidaamka guddiga wuxuu qiyaastii 3 jeer ka qaalisan yahay.
Shakhsi ahaan, waxaan naftayda ka dhigtay gurigeyga oo dhan, waxaanan kuu sheegi karaa in aysan ka fiicneyn laminate xitaa ka sii fiican! Waxaan haystaa ilmo yar iyo kariyuhu kama cabsanayo biyaha, ma aha qoraal aan la mid ahayn. Haa, iyo kan ugu weyn ee aan dhihi doono waa qiimaha iyo sahlanaanta shaqada, waxaan ku dari karaa sawirada erayadeyda oo dhan, qofna wuxuu noqon karaa mid waxtarka leh oo aan ka xumaanin calyada, waa in lagu dabaqo laba lakab kadib marka shaqada la dhammeeyo! Si aad u codsato lacquer, waxaad u baahan tahay sabir iyo buraash kaliya, marnaba ha ku daboolin lacaga leh Mashiinka Maskaxda ama qalajiyaha, ma aha mid aad u wanaagsan. Tilmaamaha ugu muhiimsan waxaa si sahlan loogu sawiraa guriga iyagoo leh jajab koronto ama sawir.
Waxaan doonayaa inaan kula wadaagno aragtidayda wanaagsan ee saxanka OSB "Kronospan". Tani waa qalab aad u muhiim ah oo ku habboon dhismaha iyo dayactirka. Ugu horreyn, waxaan u isticmaalnay saxanka si aan u hagaajino guriga, ama halkii qoyskiina. dhismayaashu waxay dib u dhistaan ​​dabaqa iyo aqalka eey ey samaysay dabac diiran. Waqti ka dib, waxaan soo iibsanay xero, guriga waxaa jiray cabsi (way adagtahay in loo yeedho guri). Dabcan, waan burinay, wiilkuna wuxuu nagu taliyay inaan dhisno guri (dhismo deg deg ah) oo ka yimid mashiinka OSB "Kronospan". Waan ka wada hadalnay oo go'aansaday inaan dhisto. Nidaamka dhismaha wuxuu qaatay laba asbuuc oo keliya, guriguna wuxuu u muuqday qurux badan, diiran, gudaha gudaha ayuu ka ureeyaa quruxda. Gudaha, waxaan furay caanaha, dibedda lagu daaweeyo rinjiga gaarka ah. Guud ahaan, waan ku qanacsan nahay, waxaan ku nasan karnaa farxad weyn! Waxaan kugula talinayaa qof walba in uu isticmaalo saxanka OSB "Kronospan"!